Home News Booliska kenya oo Nairobi ka Baadi-goobaya dad Nigerian ah!!
Booliska kenya oo Nairobi ka Baadi-goobaya dad Nigerian ah!!
Ciidamada Booliska dalka Kenya ee ka howlgalla Magalada Nairobi ayaa waxa ay bilaabeen in ay xiraan dad u dhashay dowladda Nigeria,kuwaas oo ku dhaqana Xaafado ka tirsan Magalada Nairobi.
Inta la xaqiijiyay 19 Nigerian ah ayaa lagu soo waramayaa in ay xir xireyn Booliska Kenya,kuwaas oo laga soo kala qabtay Xaafadaha Umoja, Kasarani iyo Roysambu,kuwaas oo lagu soo eedeeyey dambiyo kala duwan.
Saraakiil ka tirsan Booliska Kenya ayaa waxa ay ku sheegeen sababta loo qaba qabanayo dadkaas in ay ku dhaqaaqeen fal la xiriira in ay dadka ku dhacaan dhinaca Internet-ka.
“qofka ayay sheeko saaxiibnimo la bilaabayaan ayada oo ay leeyihiin waxbaan kuugu soo direynaa DHL. Intaasi kadib waxaa qofka laga soo wacayaa taleefan inta nambarkiisa laga qaado la leeyahay waa DHL yay boolisku ku warameen.
Sidoo kale waxaa dadkaasi la sheegay in qofka ay u sheegayaan in uu lacagos oo diro si alaabta ay u baahdaan loogu soo dhiibo,intasi ka dibna qofka aysan ka qabaneyn taleefoonka hadii uu lacagta tiro.
Maxkamad ayaa la filayaa in dhawaan la soo taago dadkaas ka dib markii baaris lagu sameeyo.
Previous articleKofi Annan Xoghayihii hore ee Q.M oo Geeryooday!!
Next articleHowlgalo laga Sameeynaayo Wadada Xariiriso Balcad Iyo Jowhar!!
Gudiga Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Oo Ku Dhawaaqay Dagaal Ka Dhan...